Kala baro Ahlu Jago waljallaafo iyo Ahlusunno waljamaaca Tan iyo markii uu billaawday Dagaalkii gacan ka hadalka ahaa ee u dhexeeyey Khawaarijta Alshabaab iyo Culumada Ahlusunna waljamaaca , ayaa waxaa mar qura lagu kala hormaray sidii aay cid waliba u sheegan laheyd , ama u qaadan laheyd Magaca Ahlusunna waljamaaca si aay ugu fushadaan danahooda gaar ah ama aay ugu gaaraan Mansab siyaasadeed.
Haddaba waxaa waayahaan dambe soo ifbaxayey Shaqsiyaad la magac baxay Ahlu jago waljallaafo oo aan iyagu horay loo maqal amaba aan u nasab sheegan Culumadii soo jireenka aheyd ee Ahlusunna waljamaaca, haddii aan sida kale u dhigana aan ka qayb qaadan hiil iyo hooba dagaaladii lagula jiray Khawaarijta Alshabaab .
Waxaa wax lala yaabo ama lagu yaqyaqsado ah in iyada oo aan la soo af jarin dagaalkii Waddanka looga xureynaayey Khawaarijta Alshabaab welina waddankii ku xoog badan yihiin , la wada qaato Taay iyo Koofi dheer laguna doono kursi iyo dhaqaale iyada oo la adeegsanayo Magacii sharafta badnaa ee Ahlusunna waljamaaca .
Waxaan wada ogsoonahay in culumadii dagaalka kula gashay Khawaarijta Alshabaab Gobollada Dhexe, gedo iyo Muqdisho , aay weli sidii Dagaalka ugu jiraan iyada oo aaysan jirin cid aay kaalmo ka helaan oo aan ilaaheey aheyn isla markaana aan la arag iyaga oo Shariif la soo gamay jago u hoos fadhiya.
Haddaba waxaan Ahlujago waljallaafo ku war gelineynaa ugu horeyn in aay ilaah ka baqaan , una towba keenaan isagana waydiistaan waxa aay doonayaan Adduun iyo Aakhiraba , halka aay Shariif la soo gamay wax weydiisan lahaayeen , waa haddii aay dhab tahay culumanimada aay sheeganayaane , isla markaana aysan ihaaneysan meelna uga dhicin hadafkii Culumadu ku dagaal galeen ee ahaa in aay Dalka , Dadka iyo Diintaba ka xoreeyaan Gumeysatada Casriga ah ee Khawaarijta Alshabaab, iyaga oo ilaaheey ku raali gelinaya oo aan wax mansab ah ku dooneyn.
Waxaa sidoo kale iyana Muhiim ah in ummaddu sidaas u kala garato oo aaysan isaga milmin Ahlu jago wal jallaafo iyo Ahlusunna waljamaaca, gaaladuna hadde wax sheegid uma baahna oo iyaga ayaaba raali ka ah oo wata wax allaale iyo wixii qaab daran oo dalka , dadka , iyo Diintaba wax u dhimaaya , isla markaana u dhega nugul.
Sheekh Cabdullaahi Mujaahid(Gaaldile) Nairobi